Ukucebisa iwebhusayithi: LisTop-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukukhuthaza iwebhusayithi: LisTop
Ukukhuthaza iwebhusayithi: LisTop
Ukufunda kwiiforum zeCartesia ndiye ndafumana le webhusayithi, iLisTop yenkampani enikezelwe ukubonelela ngeenkonzo zokuhlola eChile.
Ngenxa yeenkonzo ezinikezelayo, kubonakala kum njengesalathiso esihle kubaxhasi baseChile, kuba iinkonzo zayo zisukela kuphando ukuya kwizicelo ze-GIS. Into endiyifumeneyo inomdla yindawo yokukhuphela, apho banezinto eziluncedo ezisebenzayo.
Guqula ilifu lendawo ngokulandelelana P (inqaku), N (Northing), E (Easting), Z (Ukuphakama), D (Inkcazo) kwifayile ye-dxf 2d okanye 3d.
Ukuthatha i-2D okanye i-3D izilungiso kwi-Autocad, ukuvumela ukuthumela amaqaku kwi-spreadsheet ye-Excel.
Thatha amaDolophu kwi-Autocad, ukuvumela ukuthumela amaqaku kwi-spreadsheet ye-Excel.
Kukho ezinye i-lisp ezinomdla kwi-AutoCAD yokulawula ubungakanani bokubhaliweyo, ukujikeleza kombhalo, i-3D ukuya kuguquko lwe-2D kunye nokulungelelanisa ukukhutshwa kunye neepropati kwi-AutoCAD.
Iphepha elinemibala, nangona ifom yobhaliso ifuna ubhaliso olunyanzelekileyo ngokuqala u-commune nokuba ukhetha ukuba ukwelinye ilizwe ... ukubhalisa kuyiphosile impazamo yobuyatha.
Ke yiya apho ujonge khona.
I-Geofumadas, isishwankathelo sikaJulayi
GeoShow, i-Google Earth yangasese
Ndiyabulela idatha yaseMarcelo, ndiya kuhlola ithuluzi
Idatha enhle kakhulu, nangona ndingavumelani neyona nto iphezulu, ekubeni mna, into eyona nto yinkqubo yamahhala yokubala ye-polygonal evaliweyo kwaye isebenza kakuhle kakhulu, njengendandatho yeminwe.
Siyabulela kwi-Listop kunye nale ndawo, kunjalo.
Ndiyabulela idatha kunye nokuvuyiswa kwesiza, yenye yezinto ezithandekayo kwimixholo, izibingelelo.